Kenya oo Sheegtay in muwaadinad British ah oo dalkeeda lagu qafaashay lagu arkay Somalia – SBC
Kenya oo Sheegtay in muwaadinad British ah oo dalkeeda lagu qafaashay lagu arkay Somalia
Posted by Webmaster on Siteenbar 18, 2011 Comments
Wararka ugu danbeeyay ee laga helayo Dowlada Kenya ee ku aadan Haweeney u dhalatay Britian oo lagu qafaashay xuduuda Dalkaasi Deegaan ku yaala oo loo dalxiis tago ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in haweeneydaas lagu arkay meel 185 – mile u jirta Goobtii laga afduubay.
Inkastoo uu baaritaanka dowlada Kenya ee ku aadan Dabagalka halka lala aaday Haweneydan Odayga la dilay uu yahay mid maraya meeshii ugu sareysay hadana waxaan jirin cid iyo meel si rasmi ah loogu sheegay marka laga reebo in la helayo warar aan la xaqiijin karin oo ku aadan in kooxdaasi ay la adeen haweeneydaas Magaalo xeebeedka Kismaayo.
Andrew Mwangura oo ah qabiir ku xeel dheer arimaha Burcad badeeda Soomaaliya ayaa sheegay in Warar kala duwna oo uu ka helayo Kaluumeysato, Dadka Deegaanka & ilo kale ay muujineyso in ay kooxdan geeyeen Haweeneyda lalayahay Magaalada Kismaayo.
Haweeneyda la qafaashay oo ah 56 sanno jir British ah ayaa waxaa Kooxaha Qafaashay waxay sabtidii na dhaaftay ka qafaasheen Goob loo dalxiis tago oo ku taala wadanka Kenya.
Dhinaca kale Booliiska Kenya ayaa weli wada Su’aalo weydiin lagu hayo dhowr qof oo lagu tuhunsan yahay inay gacan siiyeen Kooxda afduubka geystay kuwaasi oo u dhashay Wadama Kenya & Soomaaliya.
Ciidamada amaanka Kenya ayaa waxaa ay shaaciyeen in Dhawaan Maxkamad la saari Doono Ali Babitu oo ah mid ka mid dadka lagu tuhunsan yahay inay gacan siiyeen kooxda Afduubka & Dilka Geystay waxaana Booliiska ay su’aalo weydiin ku wadana Dadka kale oo tuhun uu ku jiro.